Yeyiphi eyona Zodiac iqhelekileyo ukuphuma apho? - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Yeyiphi eyona Zodiac iqhelekileyo ukuphuma apho?
Isasazwa njani imiqondiso ye-12 yehoroscope phakathi koluntu? Funda kabanzi malunga nokuba ungubani kwaye loluphi uphawu oluqhelekileyo lwesodiac phaya.
Amathuba kukuba, sele uzibuzile ukuba ngaba baninzi abantu emhlabeni abanophawu lwe-zodiac olufanayo nolwakho. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi kusifundisa okuninzi malunga nabantu esingaphantsi kwabo nokuba kutheni sisenza izinto ezithile. Ngamnye wethu unobuntu obuhle obwahlukileyo, yiyo loo nto siye sagqiba kwelokuba sibabeke kwelona phawu luqhelekileyo lweenkwenkwezi ukuya kweyona ingaqhelekanga eMelika. Ngaba ungowalo mqondiso uqhelekileyo, okanye ngaba ungowohlobo olunqabileyo?
Ngokuqinisekileyo imiqondiso yeenkwenkwezi yazisa ngakumbi kunabanye, kodwa ngaba ipesenti yabemi iyaluthethelela lonke olu dumo nengqwalaselo? Ii-Aries, iLeos, kunye neeScorpios zehlabathi mhlawumbi zezo uninzi lwabantu abaziwayo, kodwa ngaba ngokwenene lolona luqhelekileyo? Ewe, zilungiselele isilumkiso somphangi, kuba ukuze kucace le ngxoxo, sinokutyhila ngokukodwa ukuba iScorpio lolona phawu luxhaphakileyo kubemi baseMelika.
Ezona mpawu zixhaphakileyo zodiac e-US, zibekwe kwinqanaba
Sibeke ezona mpawu zodiac zithandwayo xa kuziwa kwindlela ezibonwa ngayo phakathi koontanga babo, nto leyo ethetha ukuba ngoku lixesha lokuba ezona mpawu ziqhelekileyo zodiacac. Leliphi iqela elimiselwe ukuba liphume phambili elinamalungu amaninzi? Nangona sithanda ukucinga ukuba sahlukile, kukho iibhiliyoni zabantu emhlabeni kwaye ziimpawu zeenkwenkwezi ezili-12 kuphela.
-Fumanisa uqikelelo lwakho lonyaka ngenxa yakho 2021 horoscope -
Jonga ukuba yintoni eza ngaphambili ngoncedo lwePsychic!
IScorpio lolona phawu luqhelekileyo eMelika = 9.6% yabemi
Ubuntu beScorpio buthabatha isithsaba njenge olona phawu luqhelekileyo lwe-zodiac e-US. Ngazo zonke ezi Scorpios ziyindida kwaye ziyimimangaliso, ubomi buqinisekisiwe ukuba bumnandi kwaye buzele yimincili. Zingaphi iiScorpios ozaziyo?
Ipesenti yabantu base-US = 9.4%
Ubuntu beVirgo buza kwindawo yesibini nto leyo iyasiqinisekisa kakhulu kuba banjalo ikhethwe njengowona mqondiso we-zodiac okrelekrele. Ukwazi ukuba ubukrelekrele bulawula ngamandla yeyona nto ikhuthazayo esiyivileyo imini yonke!
Ipesenti yabantu base-US = 9.3%
Ubuntu beGemini obonwabisayo kunye nobumangalisayo yenye yezona zinto ziphambili ezibaleka uphawu lwe-zodiac. Ubuntu beGemini ngu gqiba iqela lokuhleka kwaye soze asiphoxe xa kufikwa kumba wokuzonwabisa.
Ipesenti yabantu base-US = 9.1%
Ubuntu obuthandayo bobumnandi bePisces buhamba ngendlela yabo ukuya kwisiqingatha esiphezulu seempawu eziqhelekileyo zezodiac. Abantu bePisces ngumoya wokwenene womoya omtsha kwaye bahlala behleka wonke umntu. Obu buntu baphuphayo bunosulelo ngokupheleleyo!
Ipesenti yabantu base-US = 8.8%
Njengolunye lweempawu ezintathu zomoya, iLibra kakhulu unesiphiwo xa kufikwa kunxibelelwano notshintshiselwano kwezentlalo. Ukuba nokuninzi kweLibras ngeenxa zonke kuthetha ukuba phantse siqinisekisiwe ngencoko emnandi mihla le.
Ipesenti yabemi base-US = 8.5%
Ukugqiba isiqingatha esiphezulu seempawu eziqhelekileyo ze-zodiac luphawu lweCancer horoscope. Umhlaza ngokuqinisekileyo lolunye lweempawu ezibuthathaka kakhulu zodiac kwaye uhlala usongeza umnxeba we s ukunganyaniseki kunye nokunyaniseka kutshintshiselwano oluqhelekileyo.
3 kunye no-7 ukuhambelana
Ipesenti yabemi base-US = 8.3%
Olu phawu lwenkani lweenkwenkwezi luza kwinombolo yesixhenxe kudidi lwethu lweempawu eziqhelekileyo zodiac. Nangona i Ubuntu beTaurus bunyamekela ngokwendalo, mhlawumbi kufanelekile ukuba sizithathe njengabanethamsanqa ukuba olu phawu loMhlaba ayisilo uphawu luqhelekileyo, kungenjalo akukho mntu unokuze avumelane nantoni na!
Ipesenti yabantu base-US = 8.2%
Ubuntu obucingisisiweyo nobusengqiqweni beCapricorn sesibhozo e-US ngoku. ICapricorn inobukrelekrele kakhulu kwaye bathiyile ukuchitha ixesha labo kwizinto ezingeyomfuneko. Nangona banokubonakala ngathi bayabanda, banalo uthando oluninzi abanokulunika.
Ipesenti yabantu base-US = 8.1%
Ubuntu be-Aries buphezulu kuluhlu xa kufikwa kumyalelo we-zodiac, kodwa abantu baka-Aries banethoba kwindawo yethu yokubeka olona phawu luqhelekileyo. Njengombandela wazo we-zodiac, I-Aries yibhola yomlilo kwaye ayikhe ithathe mpendulo; akukho nto inokubamba iAries!
Ipesenti yabantu base-US = 7.3%
Ngoku siphilile kwaye siyinyani kwinxalenye yokugqibela ye Iimpawu ezincinci ze-zodiac e-US kunye neSagittarius kwindawo yeshumi. I-Sagittarius idume ngokuba yenye yeempawu ze-zodiac ezinobunzima kwaye ayisiyiyo ngokwenene ekusebenzeni nzima; mhlawumbi kufuneka sibale iintsikelelo zethu ezizishumi!
Ipesenti yabantu base-US = 7.1%
Ubuntu obuvuthayo nozingcayo boLeo buqukumbela kwindawo yeshumi elinanye kodwa kungaze kudanise. U-Leo unamandla okwenyani eenkwenkwezi kwaye uyakuthanda ukuba liziko lokuqwalaselwa. Ngelishwa kuLeo, bakude ekubeni luphawu oluqhelekileyo, kodwa siqinisekile ukuba i-Leo's ego ayizukubetha!
Umqondiso oqhelekileyo oqhelekileyo = 6.3% yabemi base-US
Ukuvala inqanaba lethu kwaye apho Ubuncinci uphawu oluqhelekileyo lwe-zodiac ngu Ubuntu buka-Aquarius . Ama-Aquarian ngabathandi bobomi kodwa bakuthiyile ukuzibophelela kunye nezibophelelo ezikruqulayo. Umqondiso wokugqibela we-zodiac ngowokuhlala okwangoku kwaye wonwabele ubomi kangangoko kunokwenzeka.
Mebahiah, Guardian Ingelosi ehambisa isimilo, Ukuphefumlelwa kunye noLucidity
Indlela yobomi yenombolo 9 yokuhambelana
iipisces ziyahambelana ne-leo
Leo thanda i-horoscope ngeveki
Kuthetha ntoni ukuvumelanisa ngokomoya?
Iiplanethi ekubuyiselweni ngokutsha ngoJulayi 2019